Fihaonambe mpivarotra Sinocare voalohany natao soa aman-tsara tany Delhi-News-Sinocare
Fihaonambe mpivarotra Sinocare voalohany natao soa aman-tsara tany Delhi
Fotoana: 2019-08-16 Hits: 320
Nandritra ny 2-3 martsa 2019, dia naseho ny fivorian'ny fivarotana mpivarotra Sinocare voalohany tany Delhi araka ny fandaharam-potoana. Ao anatin'ny tanjon'ny Sinocare ny hanitatra ny tsena any ampitan-dranomasina amin'ny taona 2019, ity fiofanana momba ny famandrihana ity dia naneho ny foto-keviny momba ny fampandrosoana "mitombo am-pahavitrihana ary mizaha ny tsena amin'ny fanoloran-tena" amin'ny taona 2019 mba handray fepetra feno amin'ny lafiny maro hanomezana tolotra kalitao ho an'ny mpanjifa any ivelany ary hanolotra matanjaka fahatokisana an'ireo mpiara-miasa Indiana.
Ity fihaonambe ity dia misy fizarana roa: ny fiofanana momba ny mpivarotra ary ny fivorian'ny mpivarotra.
Nandritra ny fiofanana momba ny mpivarotra, ny ekipa biolojika Sinocare izay soloin'ny Dr. Cai Xiaohua, Chief Scientist of Sinocare, ary Andriamatoa Xiang Bo, talen'ny fivarotana tsena iraisam-pirenena an'ny Sinocare, dia nizara tamin'ny ekipa mpivarotra elitika indianina momba ny drafitry ny vokatra ao amin'ny orinasa, ny famakafakana ny vokatra, hevitry ny marika sy drafitra fampandrosoana ny tsena hahafahan'izy ireo mivarotra tsara kokoa ireo vokatra eny an-tsena sy manome serivisy aorinan'ny varotra tsara kokoa.
Tamin'ny fivorian'ny mpiara-miombon'antoka mpivarotra, ny vokatra lehibe an'ny orinasa - Safe AQ Smart, dia nahazo laza malaza avy amin'ireo masoivoho sy mpiara-miasa karana noho ny kalitao tena tsara. Ora iray monja taorian'ny namoahana ny politikam-barotra momba ny varotra dia nahazo baiko maherin'ny 10 izay mitontaly 15 tapitrisa ropia Indianina.
Amin'izao fotoana izao, India dia manana mponina mihoatra ny 1.3 miliara ary ny isan'ny olona voan'ny diabeta dia mihoatra ny 75 tapitrisa. Taorian'ny fivelarana nandritry ny dimy taona tany India avy amin'ny Sinocare International Sales Department, dia nitombo avo roa heny ny fahombiazan'ny varotra. Noho izany, nanjary ampahany lehibe tamin'ny orinasam-pandraharahana iraisam-pirenena an'ny orinasa izy io.
Manoloana ny isan'ny olona mararin'ny diabeta any India, ny Sinocare dia hanefa hatrany ny adidiny ara-tsosialy hampiditra vokatra sy vahaolana avo lenta kokoa any India, ary hanao ny anjara birikiny amin'ny fisorohana diabeta sy fitsaboana.
Pejy mialoha: Nanatrika ny MEDICAL FAIR THAILAND 2019 i Sinocare
Pejy manaraka: Fiaraha-miasa amin'ny Sinocare 2018 amin'ny YUELU SUMMIT 2018